Chelsea Oo Dhameystirtay Saxiixeedii Ugu Horeeyay Bisha Janaayo & Xiddiga Cusub Oo Qolka Labiska Kula Kulmay Xiddigaha Blues - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Chelsea Oo Dhameystirtay Saxiixeedii Ugu Horeeyay Bisha Janaayo & Xiddiga Cusub Oo...
Chelsea Oo Dhameystirtay Saxiixeedii Ugu Horeeyay Bisha Janaayo & Xiddiga Cusub Oo Qolka Labiska Kula Kulmay Xiddigaha Blues
Chelsea ayaa dhameystirtay saxiixa xiddiga reer Norway Bryan Fiabema oo noqday saxiixii ugu horeeyay kooxda ee bishaan Janaayo iyadoo da’ yarkaan uu asxaabtiisa cusub kula kulmay qolka labiska ka dib guushii ay shalay ka gaareen kooxda Burnley.
16 sanno jirkaan oo ku biiraya akadeemiga bedelkii uu u dheeli lahaa kooxda koowaad ayaa tijaabo u maray Blues dhamaadkii sannadkii tagay, wuxuu dhigay wacdarro taasoo keentay in qandaraas joogta ah laga saxiixo.
Sida ay sheegtay warbaahinta reer Norway VG waxa uu saxiixay qandaraas seddex sanno iyo bar ah isagoo durbaba soo gaaray xarunta tababarka Chelsea ee Cobham.
Waxaa ka dib lagu martiqaaday inuu daawado kulankii ay shalay oo Sabti ah 3-0 kaga badiyeen Burnley isagoo qolka labiska kula kulmay xiddigaha kooxda koowaad.
Fiabema ayaa sawir la galay Callum Hudson-Odoi kaasoo ay isku wakiil yihiin halka uu sidoo kale la kulmay tababaraha kooxda Chelsea Frank Lampard.
Previous articleSAWIRO:-Soomaaliya & Midowga Yurub oo heshiis kala saxiixdey
Next articleSomali terrorist group, al-Shabaab, threatens to attack US targets around the world